manu vs barcar | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » manu vs barcar
manu vs barcar
Posted by virus on May 27, 2011 in Copy/Paste | 27 comments
i r s u v
မန်ယူနဲ့ ဘာကာဘယ်သူနိုင်မလဲဖြေကြည့်ပါ virus ကတော့မန်ယူပါပဲဘ
ယ်သူတွေဘယ်လိုထင်သလဲ မန်ယူရဲ့နောက်တန်းကို မက်စီ မတိုးနိုင်လောက်ပါဘူး
has written 19 post in this Website..
View all posts by virus →
ချန်ပီယံလိဒ်ရဲ.နောက်ဆုံးနေ.နောက်ဆုံးဗို်လ်လုပွဲကို အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ. ဝင်ဘလေကွင်းမှာ ကျင်းပမှာဖြစ်တဲ.အတွက် မန်ယူအနေနဲ. အိမ်ကွင်းမဟုတ်သော်ငြားလဲ ဒုတိယအိမ်ကွင်းလို.သတ်မှတ်ခံရမယ်. ကွင်းမှာကန်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ယခုနှစ်ရာသီရဲ.မန်ယူအသင်းအိမ်ကွင်းရလဒ်များကလဲ ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ရအောင်ပင်ကောင်းမွန်နေတာကိုတွေ.ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မန်ယူအနေနဲ.က ဘာကာထက်သာတာက နောက်တန်းနဲ.ဂိုးသမားတို.ရဲ.စွမ်းရည် ကအထူးကောင်းမွန်နေတဲ.အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။ ဘာစီလိုနာရဲ. အလယ်တန်းကစားသမားတွေဖြစ်တဲ. အန်နီရေစတာနဲ.ဇာဗီကိုသာအပြည်.အဝထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မန်ယူနိုင်ဂိုးရှာတွေ.နိုင်မှာပါ။ မန်ယူအသင်းသားများအနေနဲ.ဘာစီလိုနာရဲ.ဒိုင်ဗင်တွေကိုလဲ ရှောင်ရှားကစားရမှာလဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က တော့ မန်ယူပါပဲ..
မန်ယူက လူစုံတက်စုံဆိုရင် အေးဆေးဖြစ်သွားမှာပါ..
ရှေ.တန်းက ဘာဘာတော့ပ် အစား ဖာနန်ဒတ်ဒ် ဆိုပိုမိုက်မယ်..
အလယ်က အန်ဒါဆင် ကိုအဖျတ်ထား.. ရပြီးဖလား ဟဟ
မန်ယူက ဆီမီးဖိုင်နယ်ပထမအကျော.က ကစားသမားစာရင်းအတိုင်းပွဲထွက်လာမယ်လို.ပြောတယ်
မန်ယူကို အမြဲအားပေးနေတဲ့ ပရိသတ်တစ်ယောက်ဆိုတော့ အားပေးချင်တာတော့ မန်ယူပဲပေါ့… ဒါပေမယ့်လည်း နိုင်မယ်လို့တော့ တထစ်ချမပြောနိုင်ပါဘူး…. ဘောလုံးဆိုတာက မပြောနိုင်လောက်အောင်ကို အပြောင်းအလဲ မြန်ဆန်လွန်းတယ်.. ပြီးတော့ နိုင်မယ်ထင်ပေမယ့်လည်း ရှုံးသွားတတ်တာပဲလေ…. မန်ယူအနေနဲ့ ဘာစီလိုနာကို နိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းအဆမရှိ ဝမ်းသာမိမှာတော့ အမှန်ပဲပေါ့….
နှစ်စဉ် ကျင်းပနေကျ ဖြစ်တဲ့ ဥရောပ ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲရဲ့ ဗိုလ်လုပွဲကို ယခုနှစ်မှာတော့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့ရဲ့ ဝင်ဘာလေ ဘောလုံးကွင်းမှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲကို မေလ (၂၈)ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်လို့ (၂)ပတ်ကျော် လိုသေးပေမယ့် ဘောလုံး ဝါသနာရှင် တွေကတော့ ယခုအချိန် ကတည်းက ကြိုတင် ရင်ခုန်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥရောပ ဘောလုံး အင်အားကြီး နိုင်ငံတွေရဲ့ ပြည်တွင်း ပြိုင်ပွဲတွေ အားလုံးမှာ ချန်ပီယံ အသင်းတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီ ဖြစ်လို့ ဝါသနာရှင်တွေဟာ ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲ တစ်ခုကို အပြည့်အဝ အာရုံစိုက် လာကြတာပါ။ ဗိုလ်လုပွဲမှာ ယှဉ်ပြိုင် ကစားကြမယ့် နှစ်သင်းကလည်း လက်ရှိ ဘောလုံးလောကမှာ ကစားပုံ ကစားကွက် အလှဆုံးနဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး အသင်းဖြစ်တဲ့ စပိန်တို့ရဲ့ ဘာစီလိုနာ အသင်းနဲ့ အောင်မြင်မှု အစဉ်အလာ ကြီးမားပြီး ကမာ္ဘပေါ်မှာ အားပေးတဲ့ ပရိသတ် အများဆုံး ဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလန်တို့ရဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဖြစ်တာကြောင့်လည်း ဘောလုံး ဝါသနာရှင်တို့ရဲ့ စိတ်ကို ပိုမို ဖမ်းစားနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်သင်းဟာ (၂၀၀၉) ခုနှစ် ဖိုင်နယ်မှာလည်း ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး ဘာကာ အသင်းက မန်ယူကို (၂-၀)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ယူ ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်သင်းရဲ့ အားနည်းချက်၊ အားသာချက် တွေနဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားကွက်တွေကို သုံးသပ်ရရင်…
[ဝင်ဘလေဖိုင်နယ် ပွဲကြို ဒီဇိုင်းတစ်ခု]
ဝင်ဘလေဖိုင်နယ် ပွဲကြို ဒီဇိုင်းတစ်ခု
ဘာကာနဲ့ မန်ယူ ဘယ်သူသာလဲ?
ဘာကာနဲ့ မန်ယူ နှစ်သင်းလုံးဟာ ဗိုလ်လုပွဲကို ရောက်ရှိ လာတာမို့ အကောင်းဆုံး အသင်းတွေဆိုတာ သံသယ ရှိစရာ မလိုပါဘူး။ သူတို့ နှစ်သင်းရဲ့ နေရာအလိုက်ကို နှိုင်းယှဉ်ရရင်တော့ အားသာချက်တွေ၊ အားနည်းချက်တွေ ကိုယ်စီ ရှိတာကို တွေ့ရမှာပါ။
ဘာကာ အသင်းရဲ့ ဂိုးပေါက်ကို လုံခြုံအောင် ကာကွယ်မယ့် သူကတော့ ဗဲလ်ဒက်စ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဘာစီလိုနာ အသင်းရဲ့ ငယ်မွေးခြံပေါက် ကစားသမား ဖြစ်သလို အသင်းကြီးမှာ စတင် ကစားခွင့်ရတဲ့ အချိန်ကစပြီး အခုထိ လက်စွမ်းပြနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စပိန် လက်ရွေးစင် အသင်းမှာတော့ ကာစီးလက်စ်နဲ့ ရေနာတို့ နှစ်ဦးရဲ့နောက်မှာ တတိယ ဦးစားပေး အဖြစ်သာ ကစားခွင့် ရနေလို့ သူ့ကို တချို့က ကမာ္ဘ့အဆင့် ဂိုးသမား အဖြစ် အသိအမှတ် မပြုပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘာကာလို အသင်းမျိုးမှာ ပထမ ဦးစားပေး ကစားသမား အဖြစ် ကစားနေရတာကို ကြည့်ရင် သူ့အရည်အချင်းကို မှန်းဆနိုင်မှာပါ။ သူဟာ လျင်မြန် ဖျက်လတ်ပြီး ပြိုင်ဘက် တိုက်စစ်မှုးတွေနဲ့ တစ်ဦးချင်း တွေ့တဲ့အခါ ထူးချွန်တဲ့ ကာကွယ်မှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပြိုင်ဘက် အသင်းရဲ့ ဂိုးကန်သွင်းချက်ကို ပထမအကြိမ် ကာကွယ်ပြီး စင်ထွက်လာတဲ့ ဘောလုံးကို ပြိုင်ဘက်က ပြန်ကန်သွင်းရင်လည်း လျင်လျင်မြန်မြန် ကာကွယ် နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ အရပ် အနည်းငယ် ပုတာကြောင့် အမြင့်ဘောတွေ ကာကွယ်မှုမှာတော့ အားနည်းပြီး နေရာယူတာလည်း အားနည်းချက်တွေ ရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။
မန်ယူအသင်းရဲ့ ဂိုးပေါက်ကိုတော့ ဂျုဗီမှာ ကစားခဲ့တဲ့ လက်စွမ်းမျိုး ပြန်လည် ရရှိနေတဲ့ ဝါရင့် ဆရာကြီး ဗန်ဒါဆားက ကာကွယ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ မန်ယူကို (၂၀၀၅)ခုနှစ်က ပြောင်းရွှေ့လာတာ ဖြစ်ပြီး ယခုရာသီကတော့ မန်ယူ ကစားသမား သက်တမ်းတလျှောက် လက်စွမ်း အပြနိုင်ဆုံး ရာသီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အဆင့် ဂိုးသမားအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံရတဲ့ ဗန်ဒါဆားဟာ အမြင့်ဘောတွေ ကာကွယ်ရာမှာ အလွန် ထူးချွန်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘောလုံးလမ်းကြောင်း ခန့်မှန်းရာမှာလည်း ထူးချွန်သူ ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ဘက် တိုက်စစ်နဲ့ တစ်ယောက်ချင်း တွေ့တဲ့အခါ ဘောလုံးတွေ ကိုလည်း (၈၀%)ခန့် အထိ ကာကွယ်နိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသက်အရွယ် ရလာတဲ့ ဗန်ဒါဆားဟာ သူလက်ထဲက စင်ထွက်သွားတဲ့ ဘောလုံးကို ပြိုင်ဘက်က ပြန်လည် ကန်သွင်းရင်တော့ ကာကွယ်ရာမှာ အနည်းငယ် လေးလံနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဘယ်ဖက်ထောင့်ကို ပြိုင်ဘက်တွေက မြေလှိမ့် ကန်သွင်းရင်တော့ ဗန်ဒါဆားက ကာကွယ်နိုင်ခြင်း မရှိသလောက် ဖြစ်ပြီး ဒါဟာ သူရဲ့ အကြီးမားဆုံး အားနည်းချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဂိုးသမား နေရာကို နှိုင်းယှဉ်မယ် ဆိုရင် ဘာကာနဲ့ မန်ယူဟာ စွမ်းရည် တူညီနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
[ဝင်ဘလေကွင်းကြီးအား ပြင်ပမှ တွေ့မြင်ရပုံ]
ဝင်ဘလေကွင်းကြီးအား ပြင်ပမှ တွေ့မြင်ရပုံ
ဘာကာ အသင်းရဲ့ နောက်တန်းကို ကြည့်ရင် နောက်တန်းအတွင်း လူနှစ်နေရာမှာ ပီကေးနဲ့ ပူယိုးလ်(သို့) အဘီဒယ်လ်တို့ ပင်တိုင် ကစားတာ တွေ့ရမှာပါ။ တစ်ခါတရံမှာ တောင်ပံ ကစားသမားတွေ ဒဏ်ရာ ရနေရင် ပီကေးနဲ့ အဘီဒယ်လ်တို့ ကစားပြီး ပူယိုးလ်က တောင်ပံထွက် ကစားပါတယ်။ ပီကေးဟာ အမြင့်ဘောတွေ ရှင်းထုတ်ရာမှာ ထူးချွန်သလို ပူယိုးလ်ဟာလည်း အတွေ့အကြုံရင့် ကစားသမား ဖြစ်လို့ ပြိုင်ဘက် တိုက်စစ်ရဲ့ ဘောလုံး လမ်းကြောင်းကို ကြိုတင် ခန့်မှန်းနိုင်ပြီး ပြိုင်ဘက် ခြေထောက်ထဲက ဘောလုံးကိုလည်း အကောင်းဆုံး ဖျက်ထုတ်နိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူဟာ အသင်းခေါင်းဆောင်လည်း ဖြစ်လို့ မိမိ အသင်းသားတွေကို ကွင်းထဲမှာ လိုသလို ညွှန်ကြားနိုင်ပြီး စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင် ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပီကေးနဲ့ ပူယိုးလ်ဟာ ပြိုင်ဘက် တိုက်စစ်မှုးကို လူကပ် ကစားရာမှာ အားနည်းပြီး လျင်မြန်တဲ့ တိုက်စစ်မှုးနဲ့ တွေ့ရင် မထိန်းချုပ် နိုင်ကြပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ပူယိုးလ်ဟာ အသက်အရွယ် ရလာပြီ ဖြစ်လို့ လျင်မြန်မှု မရှိတော့ပဲ ပီကေးဟာလဲ တိုက်စစ်ကို လိုက်ပါလွန်းတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဘာစီလိုနာ အသင်းရဲ့ နောက်တန်း ညာဝင်းမှာ အဲလ်ဗက်စ် ကစားလေ့ ရှိပြီး ဘယ်ဝင်းမှာတော့ မက်စ်ဝဲလ်(သို့) အင်ဒရီယာနိုတို့ ကစားပါတယ်။ အဲလ်ဗက်စ်ဟာ နောက်တန်းကနေ တိုက်စစ်ကို တောက်လျှောက် လိုက်ပါပေးနိုင်ပြီး အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ကို အကောင်းဆုံး ကူညီ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူဟာ တည်ကန်ဘောတွေ ကန်ရာမှာလည်း ထူးချွန်သူပါ။ အင်ဒရီယာနို (သို့) မက်စ်ဝဲလ် ဟာလည်း တိုက်စစ်ကို အကောင်းဆုံး ပံ့ပိုးနိုင်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလ်ဗက်စ်နဲ့ အင်ဒရီယာနိုရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ တိုက်စစ်ကို လိုက်ပါလွန်းပြီး အသင်း ဘောလုံးဆုံးချိန်မှာ ခံစစ်ကို အချိန်မီ ဆင်းမကူနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြိုင်ဘက်အသင်းရဲ့ တန်ပြန် တိုက်စစ်ကနေ ဘာကာအသင်း ဂိုးပေးရလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဲလ်ဗက်စ်ဟာ ပြိုင်ဘက် ကစားသမားနဲ့ ထိခိုက်မိရင် မလိုအပ်ဘဲ ပြစ်ဒဏ်ဘော မကြာခဏ တောင်းလေ့ ရှိပါတယ်။
[ဘာစီလိုနာနှင့် မန်ယူတို့ ဖိုင်နယ် တက်ရောက်လာပုံ အဆင့်ဆင့်]
ဘာစီလိုနာနှင့် မန်ယူတို့ ဖိုင်နယ် တက်ရောက်လာပုံ အဆင့်ဆင့်
မန်ယူ အသင်းမှာတော့ အသင်းခေါင်းဆောင် ဗီဒစ်နဲ့ ဖာဒီနန်တို့ နောက်တန်း အတွင်းနေရာမှာ ကစားပါတယ်။ ဖာဒီနန် နာနေရင် စမောလင်းက ဗီဒစ်နဲ့ တွဲကစားပါတယ်။ ဗီဒစ်ဟာ ကြံ့ခိုင်မှုကို အားပြု ကစားပြီး ဖာဒီနန်ဟာ ပြိုင်ဘက် အသင်းရဲ့ ဘောလုံး လမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့ ဖြတ်တောက်ပြီး လူကပ် ကစားရာမှာလည်း စိတ်ချရသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဗီဒစ်ထက် အသင်းကို ဦးဆောင် ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဗီဒစ်ကတော့ ကြံ့ခိုင်မှုကို အားပြုကစားတဲ့ ပြိုင်ဘက် တိုက်စစ်မှုးတွေကို အကောင်းဆုံး ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး အကျဉ်းအကျပ်ထဲ ရောက်နေချိန်မှာ တည်ကန်ဘော တွေကနေ ခေါင်းတိုက် ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီး အနိုင်ဂိုးတွေ မကြာခဏ ရယူပေးတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဖာဒီနန် အားနည်းချက်ကတော့ ရာနှုန်းပြည့် ကြံ့ခိုင်မှု မရှိတာ ဖြစ်ပြီး ဗီဒစ်ရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ ကစားပုံ အနည်းငယ် ကြမ်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒ့ါအပြင် ဗီဒစ်ဟာ တစ်ခါတရံ ပယ်နယ်တီ ဧရိယာထဲမှာ ဘောလုံးကို လက်နဲ့ ထိမိလေ့ ရှိပါတယ်။ အခုလို အနည်းငယ် အားနည်းချက်တွေ ရှိပေမယ့် ဖာဒီနန်နဲ့ ဗီဒစ်ဟာ ဥရောပ အကောင်းဆုံး ဗဟို နောက်ခံ အတွဲတွေထဲမှာ အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ မန်ယူအသင်းရဲ့ ညာဝင်းမှာ လူငယ်ခြေတက်လေး ရာဖေးလ် ကစားပြီး ဘယ်ဝင်းမှာတော့ အီဗရာ ကစားလေ့ ရှိပါတယ်။ အရန် ကစားသမား တွေကတော့ ဖေဗီယို၊ အိုရှေးနဲ့ ဘရောင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဗရာဟာ တောင်ပံတစ်လျှောက် အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ကို ပံ့ပိုးနိုင်ပြီး အသင်းဘောလုံး ဆုံးချိန်မှာလည်း ခံစစ်ကို အမြန်ဆုံး ကူညီ နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အတွေ့အကြုံနဲ့ အသက်အရွယ် အရ အကောင်းဆုံး အချိန်ကို ရောက်ရှိနေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရာဖေးလ်ကတော့ လူငယ်ပီပီ သက်လုံကောင်းပြီး တိုက်စစ်ရော ခံစစ်ပါ လိုက်ပါ ကစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အနိုင်ရလိုစိတ် ပြင်းစွာ ကစားလေ့ ရှိသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အနည်းငယ် စိတ်ဆတ်ပြီး အဝါကဒ်၊ အနီကဒ်တွေ မကြာခဏ ထိသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ချက်က လွဲလို့ မန်ယူ နောက်တန်းရဲ့ တောင်ပံနှစ်ဖက်ဟာ အားနည်းချက် မရှိသလောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တန်း နေရာမှာတော့ မန်ယူဟာ ဘာကာထက် အများကြီး ပိုကောင်းပါတယ်။
ဘာစီလိုနာ အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်မှာ ဘတ်စကွက်စ်၊ ဇာဗီနဲ့ အင်ဒီယေစတာတို့ ပုံမှန် ကစားပြီး မာရှေယာနို၊ အဖယ်လေနဲ့ ကီတာတို့ကတော့ အရန် ကစားသမားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဘောလုံး ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဦးစားပေး ကစားပြီး မိမိ ခြေထောက်ထဲက ဘောလုံးကို မဆုံးရှုံးအောင် အဓိက ကစားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမြင့်ဘောတွေနဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ကစားဟန်တွေ လုံးဝမရှိဘဲ ဘောလုံး ကျွမ်းကျင်မှုကို အဓိကထားပြီး ဘောလုံးကို လှပ ညက်ညောတဲ့ ကစားဟန်နဲ့ အသာအယာ ကစားတဲ့ ဒီကွင်းကြောင့်လည်း ဘာကာ အသင်းကို ဘောလုံး ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဘောလုံးကို မိမိမိန်းမလို သဘောထားပြီး ကစားတဲ့ အသင်းလို့တောင် တင်စားကြပါတယ်။ ကွင်းလယ် ဖန်တီးရှင် ဇာဗီကတော့ ခေါင်းမှာ ရေဒါနဲ့ GPS စနစ်တွေ တပ်ဆင်ထားသလို တစ်ပွဲလုံးကို ခြုံပြီး မြင်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ မိမိ အသင်းသားတွေရဲ့ နေရာ၊ ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ နေရာတွေကို သိလွန်းတာကြောင့် သူ့ခြေထဲ ဘောလုံး ရောက်တာနဲ့ ဘယ်သူ့ကို ဘောလုံး ပေးရမလဲ ဆိုတာ တစ်ခါတည်း ဆုံးဖြတ်ပြီးသား ဖြစ်နေပါတယ်။ ဇာဗီဟာ အဝေးကန်ချက်တွေ ကောင်းမွန်ပြီး ပြစ်ဒဏ်ဘော ကန်ရာမှာလည်း ထူးချွန်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အင်ဒီယေစတာ ဟာလည်း ဘယ်တောင်ပံကနေ ပြိုင်ဘက် ခံစစ်ကို အကောင်းဆုံး ခြိမ်းခြောက်နိုင်ပြီး အဆုံးအဖြတ် ဂိုးတွေကိုလည်း သွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘက်စကွက်စ်လည်း သူတို့ နှစ်ဦးနဲ့ အတူ အကောင်းဆုံး ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး ကွင်းလယ်မှာ လှုပ်ရှား နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာကာရဲ့ ကွင်းလယ်ဟာ ပုံမှန်လည်ပတ် လှုပ်ရှားနေတဲ့ စက်ယန္တရားကြီး တစ်ခုနဲ့ ဘဲလေး ကချေသည် တစ်ဦးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပေါင်းစပ်ထားသလို စီးချက်ညီပြီး လှပညက်ညော နေပါတယ်။ တိုက်စစ်ကိုလည်း အကောင်းဆုံး ပံပိုးနိုင်ပြီး ကွင်းလယ် အဖျက် ကစားရာမှာတော့ အားနည်းတာ တွေ့ရပါတယ်။
[UEFA ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ဖိုင်နယ်ရောက် နှစ်သင်း၏ အချက်အလက်များ]
UEFA ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ဖိုင်နယ်ရောက် နှစ်သင်း၏ အချက်အလက်များ
မန်ယူအသင်းရဲ့ ကွင်းလယ် ဗဟိုမှာ ကာရစ်နဲ့ ဂစ်တို့ တွဲကစားပြီး ညာတောင်ပံမှာ ခြေစွမ်း ပြနေတဲ့ ဗလင်စီယာ၊ ဘယ်တောင်ပံမှာ နာနီ(သို့) ပက်ဂျီဆန်တို့ ကစားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရန် လူတွေကတော့ စခိုးလ်၊ ဖလက်ချာနဲ့ အင်ဒါဆင်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းကတော့ ဘယ်ပြိုင်ဘက်ထက် မဆိုသာလွန် ကောင်းမွန် နေပါတယ်။ ဘာကာ အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ဟာ ဘောလုံးကို မိမိမိန်းမလို သဘောထား ကစားတယ်လို့ တင်စားရင် မန်ယူ ကွင်းလယ်ကိုတော့ ဘောလုံးကို မိမိ ယောက္ခမလို သဘောထား ကစားတယ်လို့ တင်စား ရမလိုပါပဲ။ ကွင်းလယ် ကစားကွက် ဖန်တီးရှင် မရှိတာကြောင့် ဘောလုံးကို ခြေထဲမှာ ကြာရှည်မထားဘဲ ဘောလုံး ရလာတာတဲ့ တောင်ပံက နာနီနဲ့ ဗလင်စီယာတို့ ဆီကို အမြန်ဆုံး ပေးပို့မယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဖြတ်တင်ဘောတွေ၊ အမြင့်ဘောတွေနဲ့ ရှေ့တန်း လူတွေဆီ တိုက်ရိုက် ပေးပို့လေ့ ရှိပါတယ်။ ကာရစ်က ကွင်းလယ် အဖျက်ကို တာဝန်ယူပြီး ဂစ်ကတော့ လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေကို ဖြည့်ဆည်း ကစားပေးပါတယ်။ နာနီဟာ တစ်ခါတရံ ဒိုင်ကို လှည့်စားပြီး မလိုအပ်ဘဲ ပြစ်ဒဏ်ဘော တောင်းလေ့ ရှိပါတယ်။ မန်ယူဟာ အင်္ဂလန်ကလပ် အသင်းပီပီ ဘောလုံး ကျွမ်းကျင်မှုထက် လျင်မြန်မှုနဲ့ ခွန်အားကို ဦးစားပေး ကစားပါတယ်။ ဒ့ါအပြင် အရည်အသွေးမြင့် ကစားသမား နည်းပါးတာကြောင့် (Team Work) နဲ့ပဲ ကစားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကွင်းလယ်ချင်း ယှဉ်ရင်တော့ ဘာကာ အသင်းက မန်ယူထက် အများကြီး ပိုကောင်းပါတယ်။
ဘာစီလိုနာ အသင်းရဲ့ ရှေ့တန်းမှာ မက်ဆီက ညာတောင်ပံ၊ ပက်ဒရိုက ဘယ်တောင်ပံနဲ့ ဗီလာက တိုက်စစ်မျှားဦး နေရာမှာ ကစားပါတယ်။ မက်ဆီဟာ လက်ရှိ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမား ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ဘက် နောက်တန်းလူ (၃)ယောက်လောက်ကို ကျော်ဖြတ် နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘောလုံး ကျွမ်းကျင်မှု ကောင်းလွန်း တာကြောင့်လည်း သူခြေထဲက ဘောလုံးကို ဖျက်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဂိုးသွင်းလည်း သေချာသလို တစ်ကိုယ်ကောင်း မဆန်ဘဲ ကစားလေ့ ရှိပါတယ်။ ဗီလာကလည်း နေရာယူပုံ ကောင်းပြီး လျင်မြန်မှုနဲ့ ပြိုင်ဘက် နောက်တန်းတွေကို ဖြတ်ကျော် နိုင်ပါတယ်။ ဂိုးသွင်းလည်း သေချာပါတယ်။ ပက်ဒရိုကတော့ သူတို့ နှစ်ဦးလောက် ဂိုးသွင်း မသေချာဘဲ လျင်မြန်မှုကို အားပြုကစားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒ့ါအပြင် တစ်ခါတရံ ဟန်ဆောင်ပြီး ပြစ်ဒဏ်ဘော တောင်းလေ့ ရှိပါတယ်။ ဘာကာရှေ့တန်းရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ ကြံ့ခိုင်တဲ့ ပြိုင်ဘက်နဲ့ တွေ့ရင် မတိုးနိုင်ဘဲ အရပ်လည်း ပုတာကြောင့် အမြင့်ဘော ကစားရာမှာ အားနည်းပါတယ်။
[၂၀၁၁ ဥရောပ ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ဘလေဖိုင်နယ် ဒီဇိုင်းပုံများထဲမှ တစ်ခု]
၂၀၁၁ ဥရောပ ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ဘလေဖိုင်နယ် ဒီဇိုင်းပုံများထဲမှ တစ်ခု
မန်ယူအသင်းရဲ့ ရှေ့တန်းမှာ ရူနီဟာ ပင်တိုင် တိုက်စစ်မှုး ဖြစ်ပြီး ဟာနန်ဒက်စ်(သို့) ဘာဘာတော့ပ်က သူနဲ့ တွဲကစားပါတယ်။ ရူနီဟာ စိတ်ဓါတ်ပြင်းစွာ ကစားလေ့ ရှိပြီး လိုအပ်ရင် ကွင်းလယ်အထိ ဘောလုံး ဆင်းယူပါတယ်။ သူရဲ့ တိုးအားနဲ့ လျှင်မြန်မှုကို အသုံးချပြီး ပြိုင်ဘက် နောက်တန်းကို ဖရိုဖရဲ ဖြစ်စေကာ တွဲဖက် တိုက်စစ်မှူးကို နေရာလွတ်တွေ ဖန်တီး ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် (jumping) ကောင်းတာကြောင့် ခေါင်းတိုက်ဂိုး တွေလည်း သွင်းယူ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရူနီဟာ စိတ်ဆတ်တာကြောင့် ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ ထောင်ခြောက်ထဲကို မကြာခဏ ရောက်လေ့ရှိပြီး အဝါကဒ်၊ အနီကဒ်တွေ အပြခံ ရတတ်ပါတယ်။ ဟာနန်ဒက်စ်ကတော့ (Goal Luck) ကောင်းပြီး နေရာယူ တတ်တာကြောင့် အဆုံးအဖြတ် ဂိုးတွေ မကြာခဏ သွင်းယူ ပေးပါတယ်။ လျင်မြန်မှုလည်း ရှိပြီး ခြေစွမ်းပိုင်းကတော့ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေဆဲပါ။ ဘာဘာတော့ပ်က အမြင့်ဘော ကစားရာမှာ ကောင်းမွန်ပြီး ဘောလုံး ကျွမ်းကျင်မှု ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အနည်းငယ် လေးပြီး စိတ်ဓါတ် ပိုင်းကလည်း သာမန်ထက် မပိုတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရှေ့တန်းချင်း နှိုင်းယှဉ်ရင် ဘောလုံး ကျွမ်းကျင်မှု၊ နည်းစနစ် ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ ဂိုးသွင်း သေချာမှုမှာ ဘာကာက သာပြီး၊ ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ အမြင့်ဘော ကစားပုံမှာတော့ မန်ယူက ပိုကောင်းပါတယ်။
ဂွာဒီယိုလာနဲ့ ဖာဂူဆန်တို့ ထိပ်တိုက် တွေ့မယ့်ပွဲမှာ ဖာဂူဆန်နဲ့ အာဆင်ဝင်းဂါး၊ အန်ဆယ်လော့တီနဲ့ မော်ရင်ဟိုတို့ ယှဉ်ပြိုင်သလို ကစားကွက်ချင်း၊ နည်းဗျုဟာချင်း ယှဉ်ပြီး လူအပြောင်းအလဲ နည်းဗျူဟာ အပြောင်းအလဲနဲ့ ဦးနှောက်ချင်း ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ပွဲမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကာရဲ့ လူထုတ်ပုံနဲ့ ကစားကွက်ကို ဖာဂူဆန်လို ဝါရင့် နည်းပညာ တစ်ဦး မဆိုထားနဲ့၊ သာမန် ဘောလုံးပွဲကြည့် ပရိသတ်တွေတောင် အလွတ် ရလောက်အောင် တစ်ရာသီလုံး ပုံစံတစ်မျိုးပဲ ကစားနေတာပါ။ ဒါကြောင့် လာမယ့် ဗိုလ်လုပွဲဟာလည်း ဘာကာရဲ့ ကစားကွက် ပုံစံတစ်မျိုးတည်းနဲ့ ဖာဂူဆန်ရဲ့ နည်းဗျူဟာ အပြောင်းအလဲ၊ လူအပြာင်းအလဲ အမျိုးမျိုးနဲ့ ဉာဏ်ရည် ဉာဏ်သွေးတို့ရဲ့ ပြိုင်ပွဲကို မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အပြောင်းအလဲ မရှိလို့ ဂွာဒီယိုလာကို ထူးချွန်တဲ့ နည်းပြအဖြစ် မသတ်မှတ်ရင်တော့ မှားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဘာကာ အသင်းရဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ ရီကတ်ကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ဂွါတီယိုလာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရီကတ်ဟာ ဒီလို အောင်မြင်မှု ဆက်တိုက် ရနေရင် အထုတ်ခံရမှာ မဟုတ်ဘဲ ဂွာဒီယိုလာဟာလည်း အသင်းကို ရောက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရီကတ် အထုတ်ခံရတော့ အစားဝင်လာတဲ့ ဂွာဒီယိုလာဟာ အသင်းကို အထိုင် မဖျက်ဘဲ ကစားကွက်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် နည်းပြ ပေးခဲ့ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ ကစားသမား တွေကိုလည်း ခေါ်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသင်း တစ်သင်းကို ပုံမပျက်ဘဲ ပိုကောင်းအောင် လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိတာဟာ နည်းပြ တစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းကောင်း တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာကာဟာ မောရင်ဟို ထွက်သွားတဲ့ ချယ်လ်ဆီးနဲ့ အင်တာ၊ ဘင်နီတက်စ် ထွက်သွားတဲ့ လီဗာပူးလို မဟုတ်ဘဲ ပိုမို အောင်မြင်မှု ရလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူအပြောင်းအလဲ၊ ကစားကွက် အပြောင်းအလဲ မလုပ်တာလည်း လက်ရှိ ကစားကွက်နဲ့ လူတွေဟာ ပြိုင်ဘက်တိုင်းကို အနိုင်ယူဖို့ လုံလောက်နေလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
[ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အား ဆီမီးတွင် အနိုင်ယူကာ ဖိုင်နယ်တက်လာသည့် ဘာစီလိုနာ အသင်း]
ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အား ဆီမီးတွင် အနိုင်ယူကာ ဖိုင်နယ်တက်လာသည့် ဘာစီလိုနာ အသင်း
ယခု ချန်ပီယံလိဂ် ဖိုင်နယ်မှာလည်း ဘာကာ အသင်းဟာ ကစားနေကျ ၄-၃-၃ ကစားကွက်နဲ့ပဲ ကစားမှာပါ။ ဇာဗီ၊ အင်ဒီယေစတာနဲ့ ဘက်စကွက်စ် တို့ရဲ့ ကွင်းလယ်က အနီးပေး ဘောလုံးတွေ၊ အလူးအလိမ့်တွေနဲ့ ဘောလုံးကို စိတ်ကြိုက် ကိုင်ကစားပြီး ပြိုင်ဘက်ကို စိတ်ဓါတ်ကျအောင် လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကွင်းလယ်နဲ့ ရှေ့တန်း ကစားသမားတွေ ချိတ်ဆက်ပြီး ရှေ့တန်းက တိုက်စစ်ဆင်ဖို့ နေရာလွတ်တွေ (one-two) တွေနဲ့ ဂိုးရအောင် ဖန်တီးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပြိုင်ဘက်ကို ဧရိယာနား ရောက်ရင် နောက်တန်း တောင်ပံ ကစားသမားတွေနဲ့ အလယ်တန်း ကစားသမားတွေဟာ ရှေ့တက်ပြီး ပြိုင်ဘက် နောက်တန်းကို ဖိအားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပြိုင်ဘက်တွေ အနေနဲ့ လူကပ် ကစားဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘဲ ကြုံသလို ဖျက်ထုတ်ရင်း ပြစ်ဒဏ်ဘောတွေ၊ ဂိုးတွေ ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာဗီးနဲ့ အင်ဒီယေစတာတို့ ကလည်း အဝေးကန်ချက် တွေနဲ့ ဂိုးရယူနိုင်စွမ်း ရှိပြီး မက်ဆီရဲ့ တစ်ဦးချင်း စွမ်းရည်ကနေလည်း ဂိုးရနိုင်တာမို့ ဘာကာ အနေနဲ့ ဂိုးရဖို့ မခက်ခဲပါဘူး။ ဘောလုံး ပျက်သွားရင်တော့ ဘာကာဟာ ကွင်းလယ်မှာတင် ပြိုင်ဘက်ဆီက ဘောလုံးကို ရယူနိုင်အောင် ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ဘက် အသင်းဟာ ဘာကာရဲ့ ကွင်းဘက်ခြမ်း အထိ တိုက်စစ် ဆင်နိုင်ရင်တော့ ဂိုးပြန်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခု ဗိုလ်လုပွဲမှာ မန်ယူ အသင်းကို ဦးဆောင် ပဲ့ကိုင်ပေးမယ့် သူကတော့ လက်ရှိ ဘောလုံးနည်းပြ တွေထဲမှာ အအောင်မြင်ဆုံး ဖြစ်ပြီး ဘောလုံး လောကရဲ့ ဂန္တဝင်နည်းပြ တစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံထားရတဲ့ ဆရာကြီး ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ၁၉၈၆ခုနှစ် မန်ယူကို ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ အချိန်ကစပြီး အခုအထိ အသင်းပြောင်းခြင်း မရှိဘဲ မန်ယူအသင်း တစ်သင်းထဲကို နည်းပြ ပေးသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ (၂၄)နှစ် အတောအတွင်း ဘောလုံးသမားကောင်း များစွာ မွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီး အသင်းကိုလည်း အောင်မြင်မှုများစွာ ရအောင် စွမ်းဆောင် ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဖာဂူဆန် လက်ထက်မှာ ကန်တိုနာတို့ ဘောလုံးမျိုးဆက်၊ ဘက်ခမ်း၊ နဗီးလ်၊ ဂစ်တို့ မျိုးဆက်၊ စီရော်နယ်လ်ဒိုတို့ မျိုးဆက်ကနေ ယခု ဟာနန်ဒက်စ်တို့ မျိုးဆက်အထိ ဘောလုံး မျိုးဆက်ပေါင်း များစွာ ပြောင်းလဲ ခဲ့ပါတယ်။
ဥရောပ ဘောလုံးဘုရင် ရွေးချယ်မည့် ဝင်ဘာလေ ညကို ကြိုတင် ရင်ခုန်ခြင်း (၁)
ဒီလို ဘောလုံး မျိုးဆက်ပေါင်း များစွာ ပြောင်းလဲ ခဲ့ပေမယ့် မပြောင်းလဲ တာကတော့ မန်ယူ အသင်းရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၂ခုနှစ်က စပြီး ယခု အချိန်အထိ မန်ယူအသင်းကို ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား(၁၂)ကြိမ် ဆွတ်ခူးစေခဲ့ပြီး FAဖလား (၅)ကြိမ်၊ ကားလင်းဖလား (၄)ကြိမ်၊ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား(၂)ကြိမ် အပြင် အခြား ဆုဖလားပေါင်း များစွာကိုလည်း ဆွတ်ခူးရရှိအောင် စွမ်းဆောင် ထားပါတယ်။ ဖာဂူဆန်ရဲ့ အစွမ်းကြောင့်လည်း ယခုဆိုရင် မန်ယူ အသင်းဟာ အင်္ဂလန် အမှတ်ပေး ချန်ပီယံ(၁၈)ကြိမ် ရရှိထားတဲ့ လီဗာပူးလ် အသင်းကို ကျော်လွန်ပြီး အင်္ဂလန် ပြည်တွင်းမှာ အအောင်မြင်ဆုံး အသင်းအဖြစ် အမှတ်ပေး ချန်ပီယံ (၁၉)ကြိမ် ရရှိကာ ဦးဆောင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
[ရှော်ကေးအသင်းအား ဆီမီးတွင် အနိုင်ယူကာ ဖိုင်နယ်တက်လာသည့် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်း]
ရှော်ကေးအသင်းအား ဆီမီးတွင် အနိုင်ယူကာ ဖိုင်နယ်တက်လာသည့် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်း
ဖာဂူဆန်ဟာ (၁၉၉၉)ခုနှစ်မှာ မန်ယူကို(၁)နှစ် အတွင်းဖလား(၃)လုံး ရအောင် စွမ်းဆောင် ပေးခဲ့ပြီး သူရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုကြောင့် (Sir)ဘွဲ့ ကိုလည်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း နှစ်တွေမှာတော့ ဖာဂူဆန်ဟာ သူ့ရဲ့ဘောလုံး အင်ပါယာကို ဥရောပအထိ ချဲထွင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မန်ယူဟာ ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲ နောက်ဆုံး (၄)နှစ်မှာ (၃)ကြိမ်မြောက် အဖြစ် ဖိုင်နယ် ရောက်ရှိလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖာဂူဆန်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ဘောလုံးသမား တွေထဲမှာ ပထမဆုံး အဖြစ် ကမ္ဘာ့ကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမား ဆုကို ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒို ကိုလည်း မန်ယူ အသင်းကနေ မွေးထုတ် ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဖာဂူဆန်ဟာ သူ့စည်းကမ်း မလိုက်နာတဲ့ ဘောလုံးသမား တွေကိုလည်း တွေဝေခြင်းမရှိဘဲ အသင်းကနေ ရောင်းထုတ်လေ့ ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဘယ်ဘောလုံးသမားမှ သူ့ကို ကလန်ကဆန် မလုပ်ရဲလို့ အသင်းကို သူလိုချင်တဲ့ ပုံစံရအောင် ကိုင်တွယ်ရာမှာ လွယ်ကူ ချောမွေ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ အသင်းရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုလည်း အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်ယူ ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာစီလိုနာနဲ့ ကစားမယ့် ပွဲအတွက်လည်း မန်ယူ အသင်းသားတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ဟာ အမြင့်ဆုံးကို ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖာဂူဆန်ရဲ့ အောင်မြင်မှု၊ အတွေ့အကြုံနဲ့ ဉာဏ်ရည် ဉာဏ်သွေးတွေကြောင့် ဘာစီလိုနာကို အနိုင် ကစားနိုင်မယ့် နည်းဗျူဟာတွေ သူ့မှာ သေချာပေါက် ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူညွှန်ကြားတဲ့ အတိုင်း မန်ယူ အသင်းသားတွေ ကစားနိုင်ရင် ဘာစီလိုနာကို အနိုင်ရနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာ ဆိုတဲ့ ပဟေဠိ ပုစာ္ဆကို ဖာဂူဆန်နဲ့ မန်ယူ အသင်းသားတွေ ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း ရှိမရှိ ဆိုတာတော့ ပြိုင်ပွဲညမှာပဲ သိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာပေါက် ပြောနိုင်တာ တစ်ခုကတော့ အကယ်၍ မန်ယူ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရင်တောင် နည်းဗျူဟာ မှားယွင်းလို့ မဟုတ်ဘဲ ဘောလုံးသမား တွေရဲ့ အရည်အသွေးကြောင့် ရှုံးနိမ့်တာမျိုးပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ယခုနှစ် ဘောလုံးရာသီမှာ မန်ယူအသင်းဟာ ချယ်လ်ဆီး၊ အာဆင်နယ်၊ ရှော့လ်ကဲစတဲ့ ကစားဟန် မတူတဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေကို နည်းဗျုဟာ အမျိုးမျိုး သုံးပြီး ကျော်ဖြတ် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာနဲ့ ပွဲအတွက်လည်း မန်ယူမှာ ကြီးမားတဲ့ နည်းဗျုဟာ အားသာချက် တစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ဘာစီလိုနာ ဘယ်လို ကစားမယ် ဆိုတာ ဖာဂူဆန် ကြိုသိနေပြီး မန်ယူ ဘယ်လို ကစားမယ် ဆိုတာကိုတော့ ဂွါတီယိုလာ ကြိုမသိနိုင်ပါဘူး။ အကယ်၍ မန်ယူရဲ့ ပြိုင်ဘက်ဟာ ဘာစီလိုနာသာ မဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီအားသာချက်ဟာ ပွဲရဲ့ အနိုင်အရှုံးကို ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ အထိ အကျိုး သက်ရောက်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် နည်းစနစ် ကြွယ်ဝတဲ့ ဖာဂူဆန် အနေနဲ့ ဘယ်လို ကစားကွက်၊ ဘယ်လို လူတွေ သုံးစွဲနိုင်လဲ ဆိုတာကို သုံးသပ် တင်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။
မန်ယူ အသင်းရဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားကွက် တစ်ခုကတော့ (၄-၃-၃) ကစားကွက်နဲ့ ဘာစီလိုနာကို သူသေကိုယ်သေ တိုက်စစ်ဖွင့် ကစားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကစားကွက်ဟာ ဘာကာလို (Position Football) ကို အကောင်းဆုံး ကစားနေတဲ့ အသင်းကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အတွက် စွန့်စားလွန်းရာ ကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖာဂူဆန်ဟာ တစ်ခါတစ်ရံ မမျှော်လင့်တဲ့ ကစားကွက်တွေ သုံးပြီး ပြိုင်ဘက်ကို အနိုင်ယူလေ့ ရှိပါတယ်။ ယခုနှစ် FAဖလား ကွားတား ဖိုင်နယ်မှာ အာဆင်နယ်နဲ့ ကစားတော့ ဒဏ်ရာ ပြဿနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ မန်ယူ အသင်းဟာ နောက်တန်း ကစားသမား(၇)ယောက် အထိ သုံးပြီး ရာဖေးလ်နဲ့ ဖေဗီယိုကို တောင်ပံတိုက်စစ်မှာ တင်ကစားကာ အာဆင်နယ်ကို အနိုင် ယူခဲ့ပါတယ်။
[၂၀၁၀-၁၁ ဘောလုံးရာသီ ဥရောပ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲတွင် ဂိုးအများဆုံး သွင်းယူထားနိုင်သူများ]
၂၀၁၀-၁၁ ဘောလုံးရာသီ ဥရောပ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲတွင် ဂိုးအများဆုံး သွင်းယူထားနိုင်သူများ
ဒါကြောင့်လည်း ယခုဗိုလ်လုပွဲမှာ ဘာကာကို တိုက်စစ်ဆင် ကစားသင့်ရင် ကစားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုနှစ် ဘောလုံးရာသီမှာပဲ အသင်းအချို့ဟာ ဘာကာကို တိုက်စစ်ဖွင့် ကစားခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ထင်ရှားတဲ့ ပွဲတွေကတော့ ဘာစီလိုနာရဲ့ နူးကမ့်ပ်ကွင်းမှာ ကစားခဲ့တဲ့ ဘာကာနဲ့ ရီးရဲတို့ရဲ့ ပွဲနဲ့ ဘာကာနဲ့ ရှက်တာဒိုးနက်စ် တို့ရဲ့ ပွဲတွေပဲဖြစ်ပြီး ပြိုင်ဘက် နှစ်သင်းလုံး ဘာကာကို ခြေပြတ်ဂိုးပြတ်နဲ့ အရေး နိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ ရီးရဲ အသင်းဟာ အိုဇေးလ်၊ ရော်နယ်ဒို၊ ခါဒီရာ၊ ဒီမာရီယာ စတဲ့ တိုက်စစ်သန်တဲ့ ကွင်းလယ် ကစားသမားတွေနဲ့ ဘာကာကို တိုက်စစ်ဆင်ဖို့ ကြိုးစား ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပွဲမတိုင်မီ မော်ရင်ဟိုရဲ့ အလွန်အကျွံ စိတ်ဓါတ် မြှင့်တင်မှု၊ ဘာကာပရိသတ် တစ်သိန်းကျော် ရှေ့မှာ ကစားရတဲ့ အချက်နဲ့ မဟာပြိုင်ဘက် ဆိုတဲ့ အချက်တွေကြောင့် အတွေ့အကြုံ နုနယ်တဲ့ ရီးရဲလူငယ် ကစားသမား လေးတွေဟာ ဖိအားတွေ များခဲ့ပြီး ဝန်နဲ့အားနဲ့ မမျှ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရီးရဲအသင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်နဲ့ အွန်လိုင်းဂိမ်း ကစားသလို ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဂိုးပြတ် ရှုံးနိမ့် ခဲ့ရပါတယ်။ ရှက်တာကတော့ ဘာကာကို တိုက်စစ်ဖွင့် ကစားခဲ့ပြီး နှစ်သင်းလုံး ဂိုးသွင်းခွင့်တွေ အမြောက်အမြား ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘာကာ ကစားသမား တွေက ဂိုးသွင်း ပိုသေချာတာကြောင့် ရှက်တာအသင်း ရှုံးနိမ့်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယခု ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲဟာ ဝင်ဘာလေမှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပြီး မန်ယူ ကစားသမားတွေ ဟာလည်း အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်ပြီး စိတ်ဓါတ် ကောင်းသူတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင် မန်ယူရှေ့တန်းက ဂိုးသွင်းလည်း မညံ့လို့ ဘာကာကို တိုက်စစ်ဖွင့် ကစားမယ် ဆိုရင်တော့ ရီးရဲ့နဲ့ ရှက်တာလို ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ရလဒ်မျိုး ထွက်စရာ အကြောင်း လုံးဝမရှိပါဘူး။
မန်ယူဟာ (၄-၃-၃) ကစားကွက်နဲ့ ကစားရင် ဂိုးသမားနဲ့ နောက်တန်းကတော့ ဗန်ဒါဆား၊ ဖာဒီနန်၊ ဗီဒစ်၊ အီဗရာနဲ့ ရာဖေးလ်ပဲ ကစားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလယ်တန်းကတော့ ကာရစ်၊ နာနီနဲ့ အန်ဒါဆန်(သို့) ဂစ်တို့ ကစားဖွယ် ရှိပါတယ်။ ဂစ် ကစားရင်တော့ ကွင်းလယ် ဖန်တီးမှု ပိုမိုကောင်းလာ နိုင်ပေမယ့် ကွင်းလယ် ကစားကွက် ကျပ်တဲ့ပွဲမျိုး ဆိုရင် ဂစ်ရဲ့ ကစားပုံဟာ သူအားသန်တဲ့ တောင်ပံဘက်ကို ယိုင်သွားတာကိုတော့ သတိပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ နောက်တန်းမှာ ဖာဒီနန် နာနေရင် စမောလင်းက သူ့နေရာ ဝင်ကစားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကာရစ်ဟာ စမောလင်းကို အနည်းငယ် ကာ.ကစားပေးရမှာ ဖြစ်ပြီး ကွင်းလယ်စည်းချက် လျော့သွားဖွယ် ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် လူမစုံရင်တော့ ဒီကစားကွက်ကို အသုံးပြုဖွယ် မရှိပါဘူး။ လူစုံရင်တော့ ကစားမှာ ဖြစ်ပြီး ရှေ့တန်းမှာတော့ ဗလင်စီယာ၊ ရွန်နီနဲ့ ဟာနန်ဒက်စ်တို့ ကစားဖွယ် ရှိပါတယ်။ လျင်မြန်တဲ့ ဗလင်စီယာဟာ ချယ်လ်ဆီးနဲ့ ပွဲမှာ မာလူဒါနဲ့ အက်ရှ်လေကိုးလ်ကို ဖိအား ပေးသလို ဘာကာရဲ့ ခံစစ်ပျော့ကွက် နေရာဖြစ်တဲ့ နောက်တန်း ဘယ်အစွန် နေရာကို တောက်လျှောက် ဖိအားပေးပြီး အင်ဒီယာစတာနဲ့ ဘာကာ နောက်တန်းတောင်ပံ ကစားသမား အင်ဒရီယာနို (သို့)မက်စ်ဝဲလ်တို့ ချိတ်ဆက်လို့ မရလောက်အောင် ကစားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခွင့်အရေး ရရင် ဖြတ်တင်ဘော တွေနဲ့ ဂိုးရဖို့ ဖန်တီးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လျင်မြန်မှုနဲ့ တိုးအားကောင်းတဲ့ ရွန်နီဟာ ဘာကာနောက်တန်း ညာအစွန်က အဲလ်ဗက်စ်နဲ့ ဘာကာဗဟို ခံစစ်မှူးတွေကို ဖရိုဖရဲ ဖြစ်အောင် တိုးကစားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ တိုးအားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ နေရာလွတ်တွေနဲ့ ရရှိလာတဲ့ အခွင့်အရေး တွေကို သူကိုယ်တိုင် ဒါမှမဟုတ် ဟာနန်ဒက်စ်နဲ့ နာနီတို့ အသုံးချပြီး ဂိုးရအောင် ကြိုးစားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အီဗရာနဲ့ ရာဖေးလ်ဟာလဲ တိုက်စစ်နဲ့ ခံစစ်ကို ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းညှိပေးပြီး အထူးသဖြင့် အီဗရာဟာ ရွန်နီကို တောက်လျှောက် ပံ့ပိုးပေး သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မန်ယူအသင်း ဟာလည်း ဘာကာရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ တိုက်စစ်နဲ့ မက်ဆီရဲ့ ထိုးဖေါက်မှု တွေကို ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကာရစ်ဟာ ဇာဗီးကို အသေ ကပ်ထားပြီး ဘာကာရှေ့တန်း အတွက် ဖန်တီးမှုတွေ လျော့သွားအောင် ကြိုးပမ်းရမှာပါ။ မန်ယူနောက်တန်း အနေနဲ့လည်း ဗီဒစ်ဟာ ပင်နယ်တီ ဧရိယာထဲမှာ နောက်ဆုံး နောက်ခံလူ ဖြစ်နေရင် တစ်ဖက် ရှေ့တန်းကို စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ကြုံသလို ဖျက်ထုတ် ကစားတာကြောင့် ပြစ်ဒဏ်ဘောတွေ ပေးရလေ့ ရှိပါတယ်။
[ဝင်ဘလေကွင်း၊ ချန်ပီယံလိဂ် ဆုဖလားနှင့် ပွဲကြိုပုံရိပ်တစ်ခု]
ဝင်ဘလေကွင်း၊ ချန်ပီယံလိဂ် ဆုဖလားနှင့် ပွဲကြိုပုံရိပ်တစ်ခု
ဒါ့ကြောင့် ဗီဒစ်ကို ဘီးကုတ်စက်ဝိုင်း ထိပ်လောက်ကနေ ဖာဒီနန်ရဲ့ ရှေ့မှာထားပြီး တစ်ဖက် ရှေ့တန်း တိုက်စစ်ကို ကြိုဖျက်တဲ့ ကစားပုံမျိုး ကစားခိုင်း သင့်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ သူ့နောက်မှာ ဖာဒီနန် ရှိတဲ့အတွက် ဗီဒစ်ဟာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ကစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ဘာကာ ကစားသမားတွေ အဝေးကန်ချက်နဲ့ ဂိုးမသွင်းအောင် ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ ဗီဒစ်ဆီက လွတ်ထွက်လာတဲ့ ဘောလုံးတွေ ကိုလည်း ဖာဒီနန်က အေးအေးဆေးဆေး စောင့်ပြီး ဖျက်ထုတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ဘာကာရှေ့တန်းဟာ ထင်သလို တိုက်စစ် ဆင်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘဲ နောက်တန်းကလည်း မန်ယူ တိုက်စစ်ကြောင့် သူတို့ရဲ့ ကွင်းလယ်နဲ့ တိုက်စစ်ကို စိတ်ကြိုက် ပံ့ပိုးပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အပြန်အလှန် တိုက်စစ်ဆင် ကစားမယ် ဆိုရင်တော့ နှစ်သင်းလုံး အခွင့်အရေးတွေ ကိုယ်စီ ရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး အကောင်းဆုံး အသုံးချနိုင်တဲ့ အသင်းက အနိုင်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲအစအဆုံး စွမ်းအင်ချွေတာခွင့် မရှိဘဲ ခြေကုန် ထုတ်ရမယ့် ယခုလို ပွဲမျိုးမှာ အန်ဒါဆင်ကို ကွင်းလယ်မှာ ယုံယုံကြည်ကြည် ပွဲထုတ်ပြီး ဗလင်စီယာနဲ့ ရွန်နီတို့ လူစု ခြေစွမ်းပြ နိုင်ရင်တော့ မန်ယူရလဒ် ကောင်းနိုင်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ချန်ပီယံလိဂ် ဆီမီးဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်ရဲ့ ဒုတိယ အကျော့မှာ ဘာကာနဲ့ အင်တာ အသင်းတို့ ဘာကာရဲ့ နူးကမ့်ပ်မှာ ကစားခဲ့ကြတယ်။ အင်တာ အသင်းဟာ ဘောလုံး ပိုင်ဆိုင်မှု (၁၄%) သာရှိပြီး ဂိုးသွင်းခွင့်လည်း(၁)ကြိမ်ပဲ ရရှိခဲ့ကာ (၁-၀)နဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်ကျော့ပေါင်း ရလဒ်နဲ့ အင်တာ အသင်းဟာ ဖိုင်နယ် တက်ရောက် သွားပါတယ်။ ဖိုင်နယ် တက်ရောက်ခဲ့ပေမယ့် တိုက်စစ် လုံးဝ ဆင်ကစားခြင်း မရှိဘဲ ခံစစ် အသေပိတ်ပြီး ပင်နယ်တီ ဧရိယာထဲမှာ ကစားသမား (၇)ဦးခန့် အထိပိတ်ဆို့ ကစားခဲ့တဲ့ မော်ရင်ဟိုနဲ့ နည်းဗျုဟာကို ဘောလုံး ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ နည်းပြတွေဟာ အပြင်းအထန် ဝေဖန်ခဲ့ပြီး မော်ရင်ဟိုကို ဘောလုံး အားကစားက ဖျက်ဆီးနေသူလို့ စွပ်စွဲ ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖာဂူဆန်ရဲ့ မှတ်ချက်ကတော့ အားလုံးနဲ့ ခြားနားပါတယ်။ ဖာဂူဆန်က မန်ယူသာ ဘာကာနဲ့ ကစားရင် သူလည်း မော်ရင်ဟိုရဲ့ နည်းဗျုဟာ သုံးပြီး ကစားသင့်ရင် ကစားမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ မန်ယူနဲ့ ဘာကာ ထိပ်တိုက် တွေ့နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် ဖာဂူဆန်ဟာ သူပြောခဲ့သလို ခံစစ် အသေပိတ် ကစားမလား ဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါပဲ။
[၂၀၁၀-၁၁ ဘောလုံးရာသီ ဥရောပ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲတွင် ဂိုးအများဆုံး ဖန်တီးပေးနိုင်သူများ]
၂၀၁၀-၁၁ ဘောလုံးရာသီ ဥရောပ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲတွင် ဂိုးအများဆုံး ဖန်တီးပေးနိုင်သူများ
အထက်မှာ ဆိုခဲ့သလို ကစားမယ် ဆိုရင်တော့ မန်ယူ အသင်းဟာ နောက်တန်းလူ (၄)ယောက်နဲ့ ကွင်းလယ်လူ (၆)ယောက်ခန့် အထိ ထားကစားဖွယ် ရှိပါတယ်။ ဒီ(၄-၆-၀) ကစားကွက်ကို ရိုးမား နည်းပြဟောင်း စပယ်လက်တီက တီထွင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ဖာဂူဆန် ကိုယ်တိုင် အချို့ ပွဲတွေမှာ ဒီကစားကွက်ကို သုံးစွဲခဲ့တာ တွေ့ရပြီး လိုအပ်တဲ့ ရလဒ်ကိုလည်း ရယူ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စပယ်လက်တီဟာ တော့တီကို အခွင့်သာရင် တိုက်စစ်ဆင် ကစားခိုင်းပြီး ဖာဂူဆန်ကတော့ စီရော်နယ်ဒိုကို တိုက်စစ်ဆင် ကစားခိုင်း ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိ မန်ယူရဲ့ လူစာရင်း အရတော့ နောက်တန်း(၄)ယောက်ဟာ အပြောင်းအလဲ မရှိနိုင်ဘဲ ကွင်းလယ်မှာ ကာရစ်၊ အန်ဒါဆန် (သို့) ဖလက်ချာ၊ ဗလင်စီယာ၊ ဂစ်၊ ဖေဘီယို (သို့) နာနီနဲ့ ရွန်နီတို့ ကစားဖွယ် ရှိပြီး ဟာနန်ဒက်စ်နဲ့ ဘာဘာတော့ပ်ကတော့ အရန်ခုံမှာ ထိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကာရစ်နဲ့ အန်ဒါဆန်တို့ဟာ လိုအပ်ရင် ပယ်နယ်တီ ဧရိယာထဲ အထိ ဆင်းကစားရမှာ ဖြစ်ပြီး ဇာဗီးကို အနည်းဆုံး လူ(၂)ယောက်က ထိန်းချုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မက်ဆီကိုတော့ မော်ရင်ဟို တီထွင်ခဲ့တဲ့ (Circle Defense) နည်းစနစ်နဲ့ အနဲဆုံး လူ(၃)ယောက်ခန့် ဝိုင်းပက် ပိတ်ဆို့ပြီး သူ့ဆီက ဘောလုံး မထွက်အောင် တားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ ကွင်းလယ်မှာ အခွင့် သာခဲ့ရင် ရွန်နီဟာ ဘာကာကို တိုက်စစ် ဆင်ကစားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကစားကွက်ရဲ့ ဦးတည်ချက်က ဂိုးမပေးရရေးဘဲ ဖြစ်လို့ မသေချာရင်တော့ (Risk) ယူပြီး တိုက်စစ်ဆင်မှာ မဟုတ်ဘဲ ပိတ်ဆို့ ကစားဖို့ပဲ ကြိုးစားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာကာ အသင်းကပဲ တစ်ချိန်လုံး တစ်ဖက်သတ် ထိုးဖေါက်မှာ ဖြစ်ပြီး ပင်နယ်တီ ဧရိယာထဲ ဘောလုံး ရောက်ရင်တော့ မန်ယူရဲ့ လူများပြားလှတဲ့ ခံစစ်ကြောင့် ဘောလုံးဟာ ပြန်ထွက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘာကာရဲ့ (One-Two) တွေဟာလည်း နေရာလွတ်တွေနဲ့ ပါးလွန်းတဲ့ ခံစစ်ကြောင့် အသက်ဝင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပွဲဟာ အချိန်ပိုတွေ၊ ပယ်နယ်တီတွေ အထိလည်း ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီကစားကွက်ရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ အသင်းကြီးချင်း ကစားရတဲ့ ပွဲမှာ မိမိအသင်းဟာ သိက္ခာကျ လောက်အောင် ခံကစားရမှာ ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်ကို ဘာဖျော်ဖြေမှုမှ ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါ့အပြင် ဒီကစားကွက်နဲ့ ကစားရင် ပွဲအချိန် ကြာလာတာနဲ့ အမျှ မိမိအသင်းရဲ့ ကစားသမားတွေ ကိုယ်တိုင် မိမိကစားတဲ့ ပုံစံခွက်ထဲ ဝင်သွားပြီး ပိတ်မိနေမှာ ဖြစ်တယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ မန်ယူအသင်းက တိုက်စစ် ကစားသမားတွေနဲ့ ကွင်းလယ် ကစားသမား တွေဟာ ပြိုင်ဘက်ရဲ့ တိုက်စစ်ကြောင့် ပွဲအချိန် ကြာလာတာနဲ့ အမျှ နောက်တန်းကို ယိုင်ဆင်းသွားပြီး မိမိ အသင်းရဲ့ ခံစစ် ထောင်ချောက်ထဲမှာ မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် ပိတ်မိမှန်း မသိ ပိတ်မိနေမှ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ မန်ယူအသင်း ဘောလုံး ရခဲ့ရင်လည်း ကျပ်သိပ်နေတဲ့ နှစ်ဖက် ကစားသမား တွေကြောင့် တိုက်စစ်ဆင်ဖို့ အတွက် ဘောလုံးလမ်းကြောင်း ဖွင့်ဖို့ ခက်ခဲမှာ ဖြစ်ပြီး ဘောလုံးဟာ မန်ယူ ကွင်းဘက်ခြမ်းမှာပဲ ဝေ့ဝဲနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပွဲရဲ့ ပထမပိုင်းမှာ မန်ယူဂိုးသွင်း ခံရရင် ချေပဂိုး ပြန်လည် ရရှိဖို့ ကစားကွက် ပြောင်းကစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် ပွဲချိန် မိနစ်(၇၀)ကျော် နောက်ပိုင်းမှာ ဂိုးသွင်း ခံရရင်တော့ ပုံစံ ဝင်နေတဲ့ ကစားကွက်ကြောင့် အပြောင်းအလဲ လုပ်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘဲ သေချာပေါက် ရှံးနိမ့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မနှစ်က မော်ရင်ဟို ဒီကစားကွက်ကို အသုံးပြု ခဲ့ရတာကလည်း မော်ရင်ဟိုဟာ ခံစစ် အားသန်တဲ့ နည်းပြတစ်ဦး ဖြစ်တဲ့အပြင် ပထမ အကျော့တုန်းက ဂိုးပြတ် အနိုင်ရထားလို့ အဝေးကွင်းပွဲမှာ ဂိုးမပေးရအောင် ရည်ရွယ်ခဲ့တာ ဖြစ်ဟန် တူပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မန်ယူအသင်း အနေနဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပရိသတ် အားပေးမှု အများဆုံး ဖြစ်နေရတာဟာ သူတို့ရဲ့ ဖျော်ဖြေမှု ပေးနိုင်တဲ့ တစ်ချက် အထိအမြန် ကစားပုံနဲ့ တိုက်စစ်ဆင် ကစားပုံတွေ ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝါရင့် နည်းပြကြီး ဖာဂူဆန်ဟာ အင်္ဂလန်မြေမှာ ကစားရမယ့် ဗိုလ်လုပွဲမှာ သိက္ခာအကျ ခံပြီး ဘာကာ အသင်းကို ခံစစ်သီးသန့် ကစားဖို့ရာတော့ ဖြစ်နိုင်ချေ အလွန်နဲလှပါတယ်။
အထက်ပါ ကစားကွက်တွေကို မသုံးဘူး ဆိုရင်တော့ ဖာဂူဆန် အနေနဲ့ မန်ယူ ကစားနေကျ ပုံစံဖြစ်တဲ့ (၄-၄-၂) သို့မဟုတ် (၄-၅-၁) ကစားကွက်တွေကို သုံးစွဲဖွယ် ရှိပါတယ်။ ကစားကွက်အရ ဆိုရင်တော့ ဘာကာ တိုက်စစ်ကို ခုခံချိန်မှာ ကွင်းလယ် တောင်ပံ ကစားသမား (၂)ယောက်ဟာ နောက်တန်းကို ဆင်းကူရမှာ ဖြစ်ပြီး မန်ယူ တိုက်စစ်ဆင် ချိန်မှာတော့ နောက်တန်း တောင်ပံကစားသမား နှစ်ယောက်ဟာ တိုက်စစ်ကို ပံ့ပိုးပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပွဲကစား နေစဉ်အတွင်း နောက်တန်းမှာ အနဲဆုံး လူ(၆)ယောက် ရှိပြီး ကွင်းလယ် အားနဲနေရင် ရွန်နီဟာ ဆင်းကူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟာနန်ဒက်စ်ကတော့ အထောင် တိုက်စစ်မှူး အဖြစ် ကစားမှာ ဖြစ်ပြီး ဗလင်စီယာနဲ့ နာနီ(သို့) ပတ်ဂျီဆန်က နောက်တန်းက အီဗရာတို့နဲ့ တွဲပြီး တိုက်စစ်ဆင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လျင်မြန်မှု ရှိပြီး ဘောလုံး ကျွမ်းကျင်မှု သာမာန်သာ ရှိတဲ့ ဗလင်စီယာက ထုံးစံအတိုင်း ဘာကာ နောက်တန်းတောင်ပံ သမားနဲ့ ကွင်းလယ် ကစားသမားတွေ ချိတ်ဆက်လို့ မရအောင် တောင်ပံတလျှောက် အတက်အဆင်း ကစားမှာ ဖြစ်ပြီး တိုက်စစ် အတွက်လည်း ဖြတ်တင်ဘောတွေ ပေးပို့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘောလုံး ကျွမ်းကျင်မှု ကောင်းတဲ့ နာနီကတော့ လိုအပ်ရင် ဘာကာ ပင်နယ်တီ ဧရိယာအတွင်း ဘောလုံး ဆွဲယူပြီး ရွန်နီနဲ့ ဟာနန်ဒက်စ်ကို ပံ့ပိုးမှာ ဖြစ်သလို ကိုယ်တိုင်လည်း ပယ်နယ်တီ ဧရိယာ အပြင်ကနေ အဝေးကန်ချက် တွေနဲ့ ဘာကာကို ခြိမ်းခြောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလယ်တန်းမှာတော့ ကာရစ်ဟာ ဇာဗီးနဲ့ ဘက်စကွက်စ်ကို ထိန်းချုပ်ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဂစ်ကတော့ မန်ယူတန်ပြန် တိုက်စစ်ဆင်ချိန်မှာ အခွင့်သာတဲ့ လူဆီကို ထိရောက်တဲ့ ပံ့ပိုးမှုတွေ လုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာကာ အသင်း ကစားကွက် စိုးမိုးသွားရင်တော့ နာနီနဲ့ ဗလင်စီယာဟာ နောက်တန်းအထိ ဆင်းရမှာဖြစ်လို့ မန်ယူ အနေနဲ့ တန်ပြန် တိုက်စစ်ပဲ ကစားဖွယ်ရာ ရှိပါတယ်။ ဘာကာ အသင်းဟာ တိုက်စစ် ကစားချိန်မှာ အဲလ်ဗက်စ်နဲ့ အင်ဒရီယာနိုတို့ ရှေ့ကို အလွန်အကျွံ တက်လေ့ရှိလို့ နောက်တန်းလူတွေနဲ့ တောင်ပံတွေ ကြားမှာ ကြီးမားတဲ့ နေရာလွတ်တွေ ဖြစ်ပေါ် နေတတ်တယ်။
[ဘာစီလိုနာနှင့် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်တို့၏ ယခုနှစ်ပြိုင်ပွဲ မှတ်သားဖွယ် အချက်အလက်များ]
ဘာစီလိုနာနှင့် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်တို့၏ ယခုနှစ်ပြိုင်ပွဲ မှတ်သားဖွယ် အချက်အလက်များ
ဒါကြောင့် တန်ပြန် တိုက်စစ်နဲ့ ကစားမယ် ဆိုရင်တော့ ဖာဂူဆန်ဟာ ရွန်နီကို ဘာကာ နောက်တန်းက နောက်ဆုံး ခံစစ် ကစားသမားနဲ့ တစ်တန်းထဲမှာ နေရာယူ ခိုင်းဖွယ် ရှိပါတယ်။ ဘာကာ ဘောလုံးပျက်ပြီး မန်ယူတန်ပြန် တိုက်စစ်ဆင်ချိန်မှာ ဘောလုံးရတဲ့ မန်ယူ ကစားသမားဟာ ကစားကွက် ဖေါ်မနေတော့ဘဲ ဘာကာ နောက်တန်းက ကွက်လပ်တွေ ကြားထဲ ဘောလုံး ထိုးပေးပြီး ရွန်နီက သူရှိတဲ့ နေရာကနေ ဘောလုံးကို ပြေးယူ အဆုံးသတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ရွန်နီရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ဖွဲ့စည်းပုံဟာ အရေးပါ ပါတယ်။ ရွန်နီဟာ ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် များသူမို့ အကွာအဝေး အတိုကို ပြေးမယ်ဆိုရင် အနည်းငယ် အထလေးပြီး အရှိန်ကလည်း သာမန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်(Inertia) သီအိုရီ အရ လမ်းကြောင်းရှည်ကို ပြေးမယ် ဆိုရင်တော့ သူ့ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ကြောင့် သူ့ရဲ့ အဟုန်ဟာ ဘာကာ ကစားသမားတွေထက် သာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရွန်နီဟာ ကွင်းလယ်က ထိုးပေးလိုက်တဲ့ ဘောလုံးနောက်ကို သူနဲ့ အခွင့်အရေး (၅၀-၅၀) အနေအထား ရှိတဲ့ ဘာကာ နောက်တန်းနဲ့ ယှဉ်ပြေးပြီး ရယူမယ် ဆိုရင်တော့ သူပဲ ဘောလုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကာ အသင်းရဲ့ လူကျွံဘော ထောင်ချောက်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ရလာတဲ့ ဘောလုံးကိုသာ ရွန်နီအနေနဲ့ သပ်သပ်ရပ်ရပ် အဆုံးသတ်နိုင်ရင် မန်ယူဂိုးတွေ ရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး ဘာကာဟာ မန်ယူရဲ့(၄-၄-၂)ကနေ (၄-၅-၁) ပုံစံ ကစားမယ့် တန်ပြန် တိုက်စစ်ကို မရှုမလှ ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကစားကွက်တွေနဲ့ ကစားမယ်ဆိုရင် ဘာဘာတော့ပ်ဟာ အရံခုံမှာပဲ ထိုင်နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကစားကွက်အရ မန်ယူရဲ့ တောင်ပံ ကစားသမားတွေနဲ့ ရွန်နီရဲ့ စွမ်းဆောင်မှု တွေဟာ အထူး အရေးပါပြီး သူတို့သာ ဟန်ချက်ညီအောင် ကစားနိုင်ရင်တော့ မန်ယူ ပရိသတ်တွေ ပျော်ရွှင်ခွင့် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘောလုံးပွဲ တစ်ပွဲရဲ့ အနိုင်အရှုံးဟာ ကွင်းအနေအထား၊ ဒိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ကံကြမ္မာ စတဲ့ အခြား အချက်အလက်တွေ ပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်။ ယခု ဗိုလ်လုပွဲကိုတော့ ကြားကွင်းဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလန်ရဲ့ ဝင်ဘာလေကွင်းမှာ ကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်မှတ်ခွဲတမ်း အရ ဘာကာနဲ့ မန်ယူဟာ လက်မှတ် အညီအမျှ စီရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး လက်ခံ ကျင်းပမယ့် အင်္ဂလန် နိုင်ငံဟာလည်း လက်မှတ်စောင်ရေ သောင်းချီ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လန်ဒန်သား အများစု ပါဝင်တဲ့ အင်္ဂလန် ပရိသတ်တွေဟာ ဗိုလ်လုပွဲမှာ ပြိုင်ဘက်ဆိုတာ ခဏမေ့ထားပြီး (AFC)ဖလား ကစားရတဲ့ ရတနာပုံ အသင်းကို ရန်ကုန် ပရိသတ်တွေ အားပေးသလို အင်္ဂလန် ကလပ် ဖြစ်တဲ့ မန်ယူကို အားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကွင်းထဲမှာရှိ်တဲ့ ပရိသတ် အရေအတွက်ရဲ့ (၃)ပုံ (၂)ပုံ လောက်ဟာ မန်ယူကို အားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မန်ယူဟာ ဝင်ဘာလေမှာ ပြည်တွင်း ဖလားပွဲတွေ မကြာခဏ ကစားဖူးလို့ ကွင်း အနေအထားနဲ့ ရင်းနှီးပါတယ်။ ဘာကာကတော့ အနည်းငယ် ကွင်းကြောင်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မန်ယူဟာ ဘာကာထက် ကွင်းအနေအထား ပိုသာပါတယ်။ ပွဲကြီးကြပ်မယ့် ဒိုင်အနေနဲ့ ကတော့ ပြစ်ဒဏ်ဘော အပေးများတဲ့ ဒိုင်ဆိုရင် ဘောလုံး ကျွမ်းကျင်မှုကို ဦးစားပေး ကစားတဲ့ ဘာကာ သာမှာ ဖြစ်ပြီး တောရုံတန်ရုံနဲ့ ပြစ်ဒဏ်ဘော မပေးတဲ့ ဒိုင်ဆိုရင်တော့ ခွန်အားနဲ့ လျင်မြန်မှု သုံးကစားမယ့် မန်ယူ သာပါတယ်။
[အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅၁၉ဝဖြင့် ebay မှတဆင့် ရောင်းချရန် ကြိုးပမ်းနေသူ၏ ဝင်ဘလေဖိုင်နယ် ကြည့်ရှုခွင့် လက်မှတ်နှစ်စောင်၏ ဓာတ်ပုံအား တွေ့မြင်ရစဉ် ~ အဆိုပါ လက်မှတ်များအား ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု ၆၁ခုရှိပြီး ပွဲမတိုင်မီ ၃ရက် ၁၂နာရီအလိုတွင် ဈေးအမြင့်ဆုံး ကမ်းလှမ်းထားသူမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၉၅ဝ ဖြစ်သည်။]
အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅၁၉ဝဖြင့် ebay မှတဆင့် ရောင်းချရန် ကြိုးပမ်းနေသူ၏ ဝင်ဘလေဖိုင်နယ် ကြည့်ရှုခွင့် လက်မှတ်နှစ်စောင်၏ ဓာတ်ပုံအား တွေ့မြင်ရစဉ် ~ အဆိုပါ လက်မှတ်များအား ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု ၆၁ခုရှိပြီး ပွဲမတိုင်မီ ၃ရက် ၁၂နာရီအလိုတွင် ဈေးအမြင့်ဆုံး ကမ်းလှမ်းထားသူမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၉၅ဝ ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် မန်ယူအတွက် အရေးပါတဲ့ အချက် တစ်ချက်ကတော့ အကျႌအရောင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မန်ယူဟာ အသင်းရဲ့ ပင်တိုင် အကျႌဖြစ်တဲ့ အနီရောင် ဝတ်ဆင်ကစားရင် စိတ်ဓါတ် အပြည့်နဲ့ ကစားနိုင်ပြီး အခြားအရောင် ဝတ်ဆင် ကစားရင်တော့ ကစားပုံ အနည်းငယ် ဝပ်သွားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီထူးခြားချက်ကို နောက်ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ ချယ်လ်ဆီးနဲ့ ပွဲနဲ့ အာဆင်နယ်နဲ့ ပွဲကို ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။
ဖာဂူဆန် လက်ထက် ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲတွေ ကစားခဲ့ တုန်းကလည်း (၁၉၉၉) ခုနှစ်မှာ အကျႌအနီ ဝတ်ဆင် ကစားခဲ့တဲ့ မန်ယူဟာ ပြိုင်ဘက် ဘိုင်ယန်ကို စိတ်ဓါတ်ပြင်းပြင်းနဲ့ အနိုင်မခံ အရှုံးမပေး ကစားခဲ့ပြီး အနိုင်ရရှိ ခဲ့ပါတယ်။ (၂၀၀၈) ဖိုင်နယ်မှာလည်း မန်ယူဟာ အကျႌအနီဝတ် ကစားပြီး ချယ်လ်ဆီးကို စိတ်ဓါတ် အပြည့်နဲ့ ကစားကာ ပင်နယ်တီ အထိ ဆွဲခေါ် သွားခဲ့ပါတယ်။ ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ်မှာ ချယ်လ်ဆီး အသင်းခေါင်းဆောင် တယ်ရီရဲ့ အဆုံးအဖြတ် ပင်နယ်တီ လွဲချော်မှုကြောင့် မန်ယူပဲ အနိုင်ရ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် (၂၀၀၉)ခုနှစ် ဖိုင်နယ်မှာတော့ အကျႌအဖြူ ဝတ်ဆင် ကစားခဲ့တဲ့ မန်ယူဟာ ဘာကာအသင်းကို ခြေစွမ်းကော စိတ်ဓါတ်ပိုင်းပါ အရှုံးပေးခဲ့ရပြီး (၂-၀)နဲ့ အရေးနိမ့်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနီရောင်အကျႌဟာ မန်ယူကို စိတ်ဓါတ် ခွန်အားရော ကံကြမ္မာ ကောင်းတွေပါ ယူဆောင်ပေးလာတဲ့ အကျႌလို့ သတ်မှတ် နိုင်ပါတယ်။ ဝင်ဘာလေ ဖိုင်နယ်မှာလည်း အကျႌအနီရောင် ဝတ်ခွင့်ရမယ် ဆိုရင်တော့ မန်ယူအတွက် အခွင့်ကောင်း တစ်ရပ်ကို ပ်ုင်ဆိုင်ခွင့် ရတယ်လို့ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥရောပ ဘောလုံးဘုရင် ဘယ်သူလဲ ?
ဘာကာနဲ့ မန်ယူဟာ (၂၀၀၉) ခုနှစ်ဖိုင်နယ်မှာ နောက်ဆုံး ကစားခဲ့ပြီး (၁)နှစ်ကျော် အကြာမှာပဲ ပြန်လည် တွေ့ဆုံတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကာ အသင်းရဲ့ လက်ရှိ အနေအထားကို ကြည့်ရင် အဓိက ကစားသမား အများစု အပြောင်းအလဲ မရှိဘဲ ခြေစွမ်းကလည်း (၂၀၀၉)ခုနှစ်နဲ့ မခြားနားတာ တွေ့ရပါတယ်။ မန်ယူကတော့ စီရော်နယ်လ်ဒို၊ တီဗက်ဇ် အစရှိတဲ့ ကစားသမား ကောင်းတွေ အသင်းက ထွက်ခွါသွားပြီး ကြယ်ပွင့် ကစားသမားတွေ ပြန်လည် ခေါ်ယူနိုင်ခြင်း မရှိလို့ ကစားသမား အင်အားဟာ (၂၀၀၉)ခုနှစ် ကထက် လျော့နည်းသွားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မန်ယူဟာ မန်ယူပဲ ဖြစ်ပြီး အသင်းဟာ ကစားကမား တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ စွမ်းရည်ကို အမီပြုထားတာ မဟုတ်ဘဲ ဖာဂူဆန်ရဲ့ ဦးဆောင်မှု အောက်မှာ (TeamWork) နဲ့ (Fighting Spirit) ကို အသုံးပြု ကစားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စီရော်နယ်ဒိုလ် ထွက်သွားပြီး နောက်ပိုင်း အသင်းဟာ ပိုမို စည်းလုံးလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသင်းဟာ (၂၀၀၉)ခုနှစ်နဲ့ ယှဉ်ရင် ကစားသမား အင်အား လျော့နည်း သွားပေမယ့် စုစည်းမှု ပိုမိုကောင်းမွန် လာပါတယ်။ နှစ်သင်းစလုံးဟာ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား(၃)ကြိမ်စီ ရရှိထားပြီး ယခုထပ်မံ ရရှိမယ် ဆိုရင်တော့ ဥရောပ အအောင်မြင်ဆုံး အသင်းတွေထဲမှာ ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကာ အသင်းဟာ သူတို့သာ ဥရောပ အကောင်းဆုံး ဆိုတာ သက်သေပြဖို့ အတွက် ယခု ဖိုင်နယ်ပွဲကို အနိုင်ရအောင် ကစားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မန်ယူ အနေနဲ့လည်း (၂၀၀၉)ခှနှစ် ရှုံးကြွေးကို ပြန်ဆပ်ဖို့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လက်တလောမှာပဲ အင်္ဂလန် ပြည်တွင်းမှာ လီဗာပူးရဲ့ စံချိန်ကို ကျော်လွှားခဲ့တဲ့ အတွက် ချန်ပီယံလိဂ် ဖလားကို (၄)ကြိမ်မြောက် ရရှိမယ် ဆိုရင် (၅)ကြိမ် ရရှိထားတဲ့ လီဗာပူးရဲ့ ဥရောပ စံချိန်ကိုပါ ကျော်လွှားဖို့ စိတ်ကူး ယဉ်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ ဖာဂူဆန် အနေနဲ့လည်း ယခုပွဲကို အနိုင်ရရှိရင် နည်းပြတစ်ဦး အနေနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလားကို (၃)ကြိမ်မြောက် ရရှိမှာဖြစ်ပြီး ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲမှာ အအောင်မြင်ဆုံး နည်းပြအဖြစ် ဖလား(၃)ကြိမ် ရရှိထားတဲ့ လီဗာပူး နည်းပြဟောင်း ပီယာစလေရဲ့ စံချိန်ကို လိုက်မီသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မန်ယူ အသင်းသားတွေ ဟာလည်း ဘာကာ တိုက်စစ်မှူး မက်ဆီရဲ့ အစောပိုင်းက ပြောခဲ့တဲ့ မန်ယူကို အဓိက ပြိုင်ဘက်အဖြစ် မသတ်မှတ်ကြောင်း မှတ်ချက်စကားကို ချေဖျက်ဖို့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အားလုံးကို ခြုံပြီး ကောက်ချက်ဆွဲ ရရင် ခြေစွမ်းပိုင်း၊ ဘောလုံး ကျွမ်းကျင်မှု၊ ဘောလုံးသမား တစ်ဦးချင်း အရည်အသွေးနဲ့ ကစားပုံမှာ ဘာကာအသင်း သာပြီး နည်းဗျုဟာပိုင်း၊ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းနဲ့ ကြံ့ခိုင်မှုမှာတော့ မန်ယူက သာပါတယ်။ မမြင်နိုင်တဲ့ ကံကြမ္မာကို ဘေးဖယ်ပြီး သုံးသပ် ရရင်တော့ ဝင်ဘာလေ ဖိုင်နယ်မှာ ပွဲကစားချိန်အတွင်း ဘာကာက မန်ယူကို အနိုင်ရဖို့ ရာခိုင်နှုန်း အနည်းငယ် ပိုများပြီး နှစ်သင်းပေါင်း သွင်းဂိုးလည်း နဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်ပို အထိ ရောက်သွားမယ် ဆိုရင်တော့ မန်ယူ အနေနဲ့ မနိုင်ရင်တောင် ပင်နယ်တီအထိ ရောက်အောင် မျှောကစားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ် ကန်ရရင်တော့ ဖိုင်နယ်မှာ ပင်နယ်တီ ကန်ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံ ရှိတဲ့ မန်ယူ အနိုင်ရဖို့ အခွင့်အရေး ပိုများတယ်လို့ သုံးသပ် တင်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘောလုံး ပရိတ်သတ်တွေ အားလုံးလည်း ဒီဆောင်းပါးတဲ့ အတူ ဝင်ဘာလေညကို ကြိုတင် ရင်ခုန်ရင်း မေလ (၂၈)ရက်နေ့ ညမှာ မိမိ ရင်ခုန်သံနဲ့ ထပ်တူကျတဲ့ ရလဒ်ကို ပိုင်ဆိုင် ရရှိပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ်လည်း သူများတွေလောက် မပြောတတ်တော့
http://www.soccermyanmar.com မှာ ဆောင်းပါးရှင်တစ်ယောက်ရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကို ရုပ်တည်နဲ့
မုန့်တီသောက်ရင်း ကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် …
ဥရောပ ဘောလုံးဘုရင် ရွေးချယ်မည့် ဝင်ဘာလေ ညကို ကြိုတင် ရင်ခုန်ခြင်း (၁) ….
ဥရောပ ဘောလုံးဘုရင် ရွေးချယ်မည့် ဝင်ဘာလေ ညကို ကြိုတင် ရင်ခုန်ခြင်း (၂) …..
တို့ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်ဗျ …..
( * _ ^ )
manu ကတော့ manu ပါ
ဟ ဟ ရေဘဝဲဘောလ် @ ပေါလ် …. ဘယ်ဘဝကနေလာမန်းနေတာတုံး….
ဖာဂူဆန် @ ဖာဂီ
ဘာကာကတော့ သရေနဲ့အနိုင်ပါပဲ၊ ဘောလုံးဆိုတာအလုံးကြီးတဲ့၊မှန်အောင်မှန်းဘို့ခက်တယ်၊ မှားရင်ကျနော်မဟုတ်ဘူး၊ ရေဘဝဲပေါမှားတာ။
မန်ယူဘက်ကနေရတာကဒီတိုင်းဆို ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ကြေးပါလာရင် မြန်မာအသင်းကို အားပေးရသလိုပါပဲ။
မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ရှိလို့ မြန်မာအသင်းဘက်က နေရင်လည်း ရှုံးတာပဲ။ အထင်မကြီးဘဲ တခြားဘက်ကနေရင်လည်း ကြည့်ရတာမကောင်းဘူး ။ အားမလိုအားမရတွေဖြစ်ရတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဒိုင်တွေက နိုင်သွားတာပဲ။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုနိုင်နိုင်ရှုံးရှုံး ကွင်းတကွင်းလုံးမှာ အပင်ပန်းဆုံးကတော့ ဒိုင်ပါပဲ။ ပြေးလိုက်လွှားလိုက် ၊ဝီဇီတွေ မှုတ်ရနဲ့ သူ့ခမျာ အရမ်းပင်ပန်းတယ်။ လေကုန် ခြေပန်းဆိုတာ သူပေါ့။
ကျန်တာတွေတော့သိပ်မသိပါဘူး၊ ဖာဂူဆန်ကတော့အနားယူခါနီးအောင်မြင်မှု နာမည်ကောင်းသမိုင်းဝင် ကျန်ရစ်ဖို့ အစွမ်ကုန်ကြိုးစားမယ်လို့တင်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ Champion လိဂ်မှာဖလားမရထာကြာပါပြီ၊ အကုန်လုံးကမန်ယူတွေကြီးပဲဆိုတော့ အကယ်သာ ဘာကာနိုင်သွားရင် မန်းဂေဇက်တရွာလုံး မှားတယ်ဆိုပြီး သိက္ခာမကျရအောင် ဘာကာဘက်က တလုံးကပ်ပြီးအနိုင်းပေးလိုက်တာပါ၊ သေချာတာကတော့ တသင်းနိုင်ပြီး တသင်းရှုံးမယ်ဆိုတာပါပဲ။
မြန်မာပြည် ဈေးကွက်အနေအထားအရ ဘာစီလိုနာ က လယ်ဗယ် ၈ဝ ရှုံး ပေါက်ပါတယ် ။ ဒီဈေးဟာ မန်ယူ ခေါ ်တဲ့ ဈေးဖြစ်ဖို ့များပါတယ် ။ ဂိုးပေါင်း က ၂ လုံး ၄ဝ ရှုံး ၅ဝ ရှုံး ကြားရပါတယ် ။ ဒီဈေးဟာလည်း ဖိုင်နယ်လို ပွဲမျိုးမှာ အမြဲ ဖွင့်နေကြ ဈေးပါ ။ အထက်နေ ပျော်အောင် ဖွင့်ပေးတဲ့ ဈေး ပေါ့ ။ ဘော်ဒီဈေး ကို ကြည့်မယ် ဆိုရင် ဒီလို အသင်းကြီး ၂ သင်း တွေ ့ဆုံမှု ။ အထူးသဖြင့် အင်္ဂလန် မှာ ဝင်ဘလေ ကွင်း မှာ ကန်မယ့်အနေ အထားမှာ မန်ယူ က သာနေတဲ့ အနေအထားမျိုး မှာ သရေကျရင် ၈ဝ ရမှာ ဆိုတော့ ပရိသတ်တော်တော်များများ ဟာ ဒီဈေးအရ မန်ယူ နေကြဖို ့များပါတယ် ။ ဒါဆို ရင် ဒိုင် တွေ က ၈ဝ ကို ရော့ ယူကြပါ ဆိုပြီး လွယ်လွယ်ပေးထားတာလား ။ ဒါမှ မဟုတ် မန်ယူ ဘက်က မနေ နေချင်အောင် ကို ဒီဈေး ဖွင့်ထားတာ လား ဆိုတာ ကို သေချာ စဉ်းစားကြရမှာ အသေအချာ ပါပဲ ။ ဘောလုံးချစ်သူ များ အားလုံး ကံကောင်းကြပါစေ ။
L 80(-) ဆိုတော့ body ကို မန်ယူကနေသင့်တယ်။ ဂိုးပေါင်း ကို အပေါ်ကနေရမယ်ထင်တယ်။ဒါမှကြည့်လို့ စိတ်အေးရမယ်ထင်တယ်။(1-1) ထက်ပို မကန်နိုင်လောက်ကြဘူးလို့ထင်တာပဲ။ဘယ်လို့ပဲဖြစြ်ဖစ် လောင်းရင် အပြည့်နိုင်မယ့်ပုံ မပေါ်ဘူး။
လောင်းကစားလုပ်တာမကောင်းပါဘူး၊ windtalker ပြောတဲ့ဖွင့်ဈေးအရ ဘာကာပဲ (1:0) နဲ့နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ မြန်မာတပြည်လုံးကမန်ယူသမားတွေတော့ အကောင်းဆုံး အရှုံးသမားတွေဖြစ်တော့မယ်နဲ့တူတယ်။
ဘောပွဲက ကန်မှ မကန်ရသေးတာ အဲလို အပိုင်ကြီးပြောလို့ မရဘူးလေ။
နှစ်သင်းလုံး တန်းတူ အခွင့် အရေး ဖိုင်နယ်ကို တက်လာကြတာ ဘဲ…..
အကောင်းဆုံး ရှင်ပြိုင် ကြမယ့် ပွဲတစ်ပွဲ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
ဘာကာ ကစားမယ့် ပုံ ခန့်မှန်းကြည့်ရတာတော့ ဒီပွဲမှာ အကယ်ဒမီဆု ပေးမယ်ဆိုရင် ဘာကာ သေချာပေါက်ရမယ့် ပွဲ။
@MaMa ပြောတာ မှန်နေတယ်ကြည်စမ်း
ပိုင်ရင်လည်း မန်ယူပါပဲ ဘာမှမလွဲဘူး
ဒီနေ့.. ဘာကာကို အားပေးမယ်..ဗျာ..
ဘာစီလိုနာ ကစားပုံကို အရမ်းကြိုက်လို့ပါ..
ကောင်း ရှုံးကြီး မဖြစ်စေချင်ပါဘူး…
ဒါပေမယ့် လောလောဆယ်.. ဘာကာ က ပိုကောင်းနေလို့..
တော်ကြာ.. ကျွန်တော်များနိုင်ငံက ရွေးကောက်ပွဲများကို ဖြစ်မှာစိုးလို့..
ကောင်း ရှုံးကြီးဆို သိပ်ရင်နာတာပဲ…
ဘောလုံးကွင်း ကို မန်း မန်း ပြီး အနိုင် ယူတဲ ့အသင်းမနိုင်လို တော်သေးတယ် နို်မို ဆို လေ တော်တော် အတိုက်ခံ ရမှာ